आजदेखि नेपाल–भारत ९औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक, बर्खे बिजुलीले बजार पाउँला ?
२०७८ फाल्गुण ११
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएको दुई देशका सचिवस्तरीय ९औं बैठक आज (फागुन ११ गते) बाट सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपालमा बर्खामा उत्पादित विद्युत बेच्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ । हरेक ६÷६...}
अर्को साता नेपाल–भारत ९औं सचिवस्तरीय बैठक, बर्खे बिजुली बेच्ने मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाइने
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएको दुई देशका सचिवस्तरीय ९औं बैठक आगामी साता (फागुन ११ र १२ गते) काठमाडौंमा हुने तय भएको छ । हरेक ६/६ महिनामा हुनुपर्ने जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटि (जेएसटी) को बैठक यस पटक झन्डै डेढ वर्षपछि हुन लागेक...}
काठमाडौं । बर्खामा देशमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्या सुरु भयो तर हिउँदमा अभाव हुने चिन्ता कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसको कुनै निर्क्याेल छैन । हरेक वर्ष देशले भारतबाट औसत २० अर्बको बिजुली किनिरहेको छ । सधैंजसो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को सुख्खा समयका लागि नेपालले भारतसँग किन्ने बिजुलीको दर पक्का गरेक...}
काठमाडौं । देशभित्र हिउँद र बर्खाको विद्युत उत्पादनको अवस्था फरक–फरक छ । हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले धान्न गाह्रो हुन्छ । यसो हुँदा विद्युत प्राधिकरणले मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात गरेर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरेको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष हिउँदमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन...}
बिजुली किन्ने भारतकाे निर्णय स्वागत गर्दै इपानले भन्यो : पहिला देशमै खपत बढाऊँ अनि बेचौं
काठमाडौं । ऊर्जा तथा जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रवर्द्धकहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले नेपालको बिजुली किन्ने भारतको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । आज (कात्तिक १७ गते बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालको निर्ण...}
प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार उपयोग गरी निजी क्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बजेटमा प्राधिकरणको पूर्...}
विद्युत व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई राेक, अनुमतिपत्र दिन मन्त्रालय बाधक
२०७६ मङ्सिर ३
काठमाडौं । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दशकौंदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी बाँड्न वा उसको बोझ खुकुलो हुने गरी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले चालेको कदम सरकारले रोकेको छ । विद्यमान कानुनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने व्यवस्था नरहेको भन्द...}
देशभित्रको विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन
काठमाडौं । विद्युत् बजार विस्तार तथा व्यापारलाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजनाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अग्रसरतामा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना भएको छ । २०७३ साउन ३ गते प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी यसको ५१ प्रतिशत स्वामित्व राखेर कम्पनी स्थापना भएको छ । जसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र...}
यसकारण खाेसिँदैन प्राधिकरणकाे ‘विद्युत् व्यापार’ !
काठमाडाैं । विश्वमा कार्य गरिरहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास बैंकहरूको इतिहासलाई केलाउँदा तीन चरण पार गरेको देखिन्छ । पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका पूर्वाधारका संचरनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एक विशेष निकायको रूपमा काम गर्न केएफडब्लू, डेभलपमेन्ट बैंक अफ जापान (KFW, Development B...}
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता समूह गठन गरेर थोकमा समुदायलाई सस्तो विद्युत् बेच्न सक्छ । यसो हुँदा सरकारको ध्यान सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणामा जानुपर्छ । वितरण प्रणालीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समुदायले नै गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । निजीकरण होइन...}